A few Forex trading myths; yakurukurwa uye yakasarudzwa - Chikamu 2 | FXCC
dzidzo - Zvinyorwa & Tutorials - forex basics nyaya - A few Forex trading myths; yakurukurwa uye yakabviswa - Chikamu 2
A few Forex trading myths; yakurukurwa uye yakabviswa - Chikamu 2
Chechidiki chete kubva muzana yevatengesi vezvitengesi vachazombozviita
Kune zvakawanda zvakagadziriswa, deta uye maonero pamusoro pechinhu ichi, asi hapana chimwe chazvo chinogumisa kana chakajeka. Tinoverenga kuti 95% yevatengesi vanokundikana, izvo chete 1% yevatengesi vekare vanotengesa mararamiro ehupenyu uye kuti vazhinji vevatengesi vanopera mushure memwedzi mitatu uye avhareji € 10k kurasikirwa. Iyi nhamba inogona kuva yechokwadi, asi inoda kuongororwa kwakawanda musati magamuchira ivo sechokwadi.
Semuyenzaniso; vangani vari kunze kwe95% vanofunga kuti vanokundikana ndivo vatengesi vatsva vanozvitsaurira nguva yavo kune unyanzvi hwokutengeserana?
Vangani vanozviwana ivo pachavo vakakwana nzvimbo yakanaka, yekuva nenguva yakakwana, kuva nemafungiro akanaka, kuva nemari yakakodzera inowanikwa uye kuchengetwa, kutora maonero anofungidzirwa pangozi kana kupiwa mubairo uye vakakura zvakakwana kuti vararame nemashoko ose? Kana iwe wakatsaurirwa, wakakura, wakanyatsogadziriswa uye utsvaga mazano akanaka zvakadaro etc. ipapo mikana yako yekubudirira ichakwira.
Nzira dzakajeka dzinobatsira zvikuru kudarika dzakaoma
Kana ikashanda, inoshanda. Chikonzero chakaita kuti vatengesi vane ruzivo vakawanda vasarudze zviri nyore pamusoro pezvinetso ndezvekuti vanga vamboedza nezvose zvinosanganiswa zvekugadzira zviratidzo uye mazano, ipapo vachazotanga kushandura-kutora matanho avo / nguva uye nzira, kuisa pfungwa pa chii chinoshanda kwavari.
Kunyange zvakadaro, vachiri vatengesi vanobudirira kunze uko, avo vachashandisa kusanganisa kwakasiyana-siyana: zvikamu zvemazuva, fractals, Fibonacci, pikot mapikicha uye mazana makuru anofamba kuti vaite zvisarudzo zvavo. Zvino izvo zvinoratidzika sechinhu chakaoma asi asi chaicho hachisi uye pakutanga kutarisa ma chati avo anotarisa vanilla. Vachave vakagadzirirwa ne-osmosis, mumakore emitambo, maitiro akawanda akavanzwa, izvo hazvirevi pachena pamatare avo.
Kutengesa maitiro kunogona kushanda chero nguva ipi zvayo
Ivo chaizvoizvo havagone. Nzira yekutengeserana / nzira inoshanda ye scalping, haigoni kuvimbiswa kushanda kwezuva / kushambadzira kwekutengesa, kana nzvimbo yekutengeserana. Unyanzvi uye nzira dzinodiwa kubva kune idzi dzakasiyana siyana dzekutengesa, dzakasiyana zvachose. Kana uri kuedza kubatsiridza kubva pamagetsi ekupedzisira, saka hazvigoneki kuti iwe unogona kushandisa chirongwa chezviratidzo zvakawanda kuti uite sarudzo dzinofungidzirwa kubva. Iwe unowanzoona mufananidzo unokurudzira kana kuti uchikomberedza maitiro ezuva repivot uye wobva waita chisarudzo chaicho.
Kutengesa kunonyanya kugadzikana mupfungwa
Kuva nepfungwa dzakanaka apo kutengesa kunokosha, zvakadaro, nhaurirano / nharo dzakasangana kwemakore mazhinji pamusoro peiyo ye3Ms; pfungwa, mari yekugadzirisa uye nzira yakakwirira yepamusoro.
Vatengesi vakawanda vaiti mari yekuchengetedza mari / njodzi ndiyo inonyanya kukosha yekutengeserana kwako, vamwe vangaratidza kuti pasina nzira yakarurama, nzira yako yepfungwa haisi yechokwadi. Kutengesa hakusi kunyanya kwepfungwa, zvepfungwa, chinhu chinokosha, asi chinogona kuparara zvachose kana munhu achishandisa kushandisa zvizere zvekutengeserana.
RISK KUKONZERA: CFDs inoshandiswa zviyero uye inouya nehutano hwekurasikirwa nemari nokukurumidza pamusana pekuwedzera. 79% yekambani dzevatengesi vezvitengesi dzinorasikirwa nemari apo inotengesa CFDs nemupi uyu. Iwe unofanirwa kuongorora kana iwe unonzwisisa kuti CFDs inoshanda sei uye iwe unogona kukwanisa kuisa njodzi yakakura yokurasikirwa nemari yako. Ndapota tora pano kuti uverenge zvakakwana Njodzi Yokuzivisa.
Copyright © 2020 FXCC. Zvose Zvakachengetedzwa.